Fisandohana :: Mpisoloky noraisim-potsiny teny Analakely • AoRaha
Fisandohana Mpisoloky noraisim-potsiny teny Analakely
NarahIna avy eny Anosy, avy eo noraisim-potsiny teny Analakely ny lehilahy iray voatondro ho mpisoloky. Efa tamin’ny taona 2017 no nisy fitoriana momba azy voarain’ny polisy eny Ilanivato. Afak’omaly antoandro no nahatrarana azy. Vola an-tapitrisany no fantatra fa efa azon’ity lehilahy ity tamin’ny fisolokiana sy filazana ho mpiasa eo anivon’ny biraon’ny fananantany etsy Anosy.
Renim-pianakaviana iray sy lehilahy iray no nanatitra taratasy fitoriana teny amin’ny polisy, rehefa voasoloky, ka very vola 1 400 000 ariary sy 2 000 000 ariary. Notadiavina nanomboka teo ilay voarohirohy.
Sendra nandalo teny Anosy ilay renim-pianakaviana lasibatra no nahatazana an’ilay lehilahy naka volabe taminy. Narahiny moramora izy. Nantsoina haingana ny polisy eny Ilanivato, nony nijanona teny Analakely ny dia. Fotoana vitsy taorian’izay, niatrana teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana nisambotra an’ity voarohirohy.
Lozam-pifamoivoizana Mpitondra môtô maty voahitsaky ny fiara
Fakana an-keriny kandida :: Sarona tany anaty ala ny jiolahy iray
Maratra eny amin’ny hopitaly